မတောက်တစ်ခေါက် သိတာလေးတွေကို ရေးသားထားပါသည်။
Posted by Rev. Min Lwin at 10:02 PM
ယနေ့ လူသားတိုင်းသည် မျှော်လင့်ချက် အမျိုးမျိုး ရှိနေကြ ပါသည်။ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး၊ မိသားစုအရေး စသည် ဖြင့် ပွင့်လင်းလာသော လက်ရှိအခြေအနေကို အမှီပြု၍ မျှော်လင့်သော အရာ အမျိုးမျိုး ရှိနေကြပါသည်။ သို့သော် ယနေ့ ကျွန်ုပ်တို့၏ မျှော်လင့်ခြင်းသည် လောကသားတို့၏ မျှော်လင့်ခြင်း များနှင့် များစွာ ကွာခြားနေ ပါသည်။ ယနေ့ ယုံကြည်သူတို့၏ မျှော်လင့်ခြင်းသည်ကား ဘုရားသခင်၌သာ ဖြစ်ပါသည်။ ထိုအကြောင်းအရာနှင့် ပတ်သတ်၍ သမ္မာ ကျမ်းစာမှ ဖတ်ကြားလိုသည့် အချက်တစ်ခုမှာ ဇာခရိ ၉း၁၂ ဖြစ်ပါသည်။
အချုပ်ခံ၍ မျှော်လင့်သောသူတို့ ရဲတိုက်သို့ ပြန်လာကြလော့။ ငါသည် နှစ်ဆသော ကျေးဇူးကို ပြုဦးမည်ဟု ယနေ့ ပင် ပြောထား၏။ (ဇာခရိ ၉း၁၂)
ထိုကျမ်းပိုဒ်တွင် အချုပ်ခံ၍ မျှော်လင့်သောသူ ဟူသောသူတို့ကို ရည်ညွှန်းထားပါသည်။ ဘုရားသခင်၌ ရှိနေသော သူတို့သည် နောက်ဆုံး အခြေအနေထိ တိုင်အောင် မျှော်လင့်စရာ ရှိနေကြပါသည်။ အခြေအနေက မည်မျှပင် ဆိုးရွား နေစေကာမူ ဘုရားသခင်က လက်ရှိအနေအထားကို ပြောင်းလဲပစ်နိုင် ပါသည်။ ထို့ကြောင့် မည်သည့် အခြေအနေ တွင်မဆို ဘုရားသခင်၌ မျှော်လင့်စရာ ကတော့ ရှိနေပါသည်။ ထို့ကြောင့် ထိုမျှော်လင့်ခြင်းနှင့် ပတ်သတ် ပြီး အချက် သုံးချက် တင်ပြလိုပါသည်။
(၁) အသက်ရှင်သော မျှော်လင့်ခြင်း
ကျွန်တော်တို့၏ အသက်ရှင်ခြင်းသည် မျှော်လင့်ခြင်းနှင့် ပတ်သတ် ဆက်နွယ်နေပါသည်။ ယနေ့ ခေတ် ကာလ တွင် ကိုးရီးယားနိုင်ငံသည် မိမိကိုယ် မိမိ အဆုံးစီရင်မှုနှုံး အမြင့်ဆုံးဟု သိရပါသည်။ အခြေအနေက ငွေကြေး ချမ်းသာ ကြွယ်ဝနေသူ၊ ပညာတတ်သူ၊ ရာထူးရှိသူ . . . အစရှိသဖြင့် ဖြစ်နေသော်လည်း မျှော်လင့်ချက် ကုန်ဆုံး သွားပြီဆိုပါက လူ့လောကတွင် ဆက်လက် အသက်ရှင်နေထိုင်လိုစိတ် ကုန်ဆုံးသွားတတ်ကြပါသည်။ သို့သော် မျှော်လင့်ချက်များ ရှိနေပါက အခြေအနေ မည်မျှပင် ခက်ခဲနေစေကာမူ အသက်ရှင်ရသည်မှာ အားနှင့် ပြည့်စုံနေ တတ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် မျှော်လင့်ခြင်း ရှိနေဘို့ အလွန်အရေးကြီးပါသည်။ မျှော်လင့်ခြင်း မရှိတော့လျှင် ထိုသူ၏ နောက်မှ ဝမ်းနည်းခြင်းများ လိုက်ပါလာတတ်ပြီး အဆုံးသို့ ရောက်ရှိသွား တတ်ပါသည်။
၁ သက် ၄း၁၃ တွင် ဖော်ပြထားသည်မှာ
ညီအကိုတို့ မျှော်လင့်ခြင်းမရှိသော အခြားသူတို့သည် ဝမ်းနည်းသကဲ့သို့ သင်တို့သည် ဝမ်းမနည်းမည်အကြောင်း အိပ်ပျော်သောသူတို့၏ အမှုအရာကို မသိဘဲ နေစေခြင်းငှါ ငါအလိုမရှိ။ (၁ သက် ၄း၁၃)
ထိုကျမ်းပိုဒ်တွင် မျှော်လင့်ခြင်းနှင့် ဝမ်းနည်းခြင်းကို ပေါင်းစပ် မှီတွယ်နေသည့် အသွင်ဖြင့် ရေးသားထားသည်ကို တွေ့ရှိရပေမည်။ ထို့ကြောင့် လူတို့သည် မျှော်လင့်ခြင်း မရှိလျှင် ဝမ်းနည်းမည်ဖြစ်ပြီး၊ မျှော်လင့်ခြင်း ရှိနေလျှင်တော့ ဝမ်းမြောက်ခြင်း ခံစားရမည်သာ ဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် သင်သည် မည်မျှ ခက်ခဲ အဆင်မပြေမှုများ ကြုံတွေ့ရ သည် ဖြစ်စေ လုံးဝ အရေးမကြီးပါ။ သင့်ထံတွင် မျှော်လင့်ခြင်း ရှိဘို့သာ အရေးကြီးပါသည်။ ထိုမျှော်လင့်ခြင်း ဘုရား သခင်၌သာ ဖြစ်ပြီး၊ ထိုကဲ့သို့သော မျှော်လင့်ခြင်းကို အသက်ရှင်သော မျှော်လင့်ခြင်းဟု ခေါ်ဆိုနိုင်ပါသည်။
အထက်တွင် အခြေပြုဖေါ်ပြခဲ့သော ဇာခရိ ကျမ်းပိုဒ်တွင် မျှော်လင့်ချက် မဲ့နေသူများအတွက် ဖေါ်ပြထားသည်မှာ “ငါသည် နှစ်ဆသော ကျေးဇူးကို ပြုဦးမည်” ဟုဖေါ်ပြ ထားပါသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ သင့်ထံတွင် ရှိသော ပြဿနာကို အဆင်ပြေရုံမျှသာ ဘုရားသခင်က ကူညီ မစမည် ဆိုသည်ထက် ကောင်းကြီး မင်္ဂလာနှင့် ထပ်မံ ရစ်ပတ်ဦးမည် ဟု ဆိုနေသယောင် ခံစားမိပါသည်။
ကျွန်တော်တို့သည် တစ်ချိန်က ကြုံတွေ့ခံစားခဲ့သော ပြဿနာများကို ပြန်လည် ခံစား တမ်းတနေသော သူများ မရှိပါ။ သို့သော် ထိုပြဿနာ ခံစားရပြီး နောက်ပိုင်းတွင် ကြုံတွေ့ရသော ကောင်းကြီး မင်္ဂလာ များကို ပြန်လည်ခံစား ကျေးဇူးတော် ချီးမွမ်းတတ် သောသူ အများအပြား ရှိကြသည် မဟုတ်ပါလား။ ဘုရားသခင်သည် သင့်ခံစား ရသော ပြဿနာကို ခံစားဝမ်းနည်းနေရသည်ထက် သင့်ကို ကောင်းကြီး မင်္ဂလာပေးလိုသော အကြံအစည်တော်က ပိုမို ကြီးမား ပါသည်။ ထိုကဲ့သို့သော မျှော်လင့်ခြင်းကို အသက်ရှင်သော မျှော်လင့်ခြင်းဟု သတ်မှတ်နိုင်ပါသည်။ လောက သားများ၏ မျှော်လင့်ခြင်းမူကား ဘုရားသခင်၏ အစွမ်းတန်ခိုးများ အပေါ်တွင် အခြေပြုထားခြင်း မဟုတ်ပေ။ ထိုသူတို့၏ မျှော်လင့်ခြင်း မူကား သေနေသောသူတို့၏ မျှော်လင့်ခြင်းသာ ဖြစ်ပေတော့သည်။
(၂) မသေနိုင်သော မျှော်လင့်ခြင်း
ပိုမို၍ အဆင့်မြင့်သော မျှော်လင့်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် အသက်ရှိသော သတ္တဝါတိုင်းသည် သေခြင်း တရားကို မလွဲမသွေ ခံစားရကြပါသည်။ ယုံကြည်သူတို့ အတွက် ပြဿနာ အခက်အခဲများ ကြုံတွေ့ရ တိုင်း ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုကို ခံစားရကြသည်။ သို့သော် ဘုရားသခင်က ပြန်လည် လန်းဆန်းလာစေရန် အမြဲတမ်း လုပ်ဆောင်ပေးတတ်သည်။
သတ္တဝါတိုင်းသည် အသက်ကြီး လာသည်နှင့်အမျှ အားလျှော့လာပြီး၊ နောက်ဆုံးတွင် ဘုန်းဘုန်းလဲ သွားတတ် သည်။ သို့သော် ရွှေလင်းယုန် ဟူသော ငှက်သတ္တဝါသည် မည်မျှပင် အားလျှော့၊ ပင်ပန်း နေစေကာမူ နေကိုကြည့် ခြင်းဖြင့် သူတို့၏ အင်အားများကို ပြန်လည်ရရှိကာ လမ်းဆန်းစေပါသည်။ ယုံကြည်သူတို့၏ အသက်တာသည် မည်မျှပင် ခက်ခဲအားကုန်ခန်းကာ ဝမ်းနည်းခြင်း ခံစားနေရပါစေ၊ ဘုရားသခင်က သင့်ကို ပြန်လည် သိမ်းဆည်းခြင်း ဖြင့် သင့်အသက်တာကို အသစ်သော လန်းဆန်းမှုကို ပြုလုပ်ပေးနေပါသည်။ သင့်ကို ဘုရားသခင်က ရွှေလင်းယုန် ကဲ့သို့ ဖန်ဆင်းထားသည်။ ဘုရားသခင်ကို ကြည့်ပြီး အသက်ရှင်သောအခါတိုင်း သင့်ထံမှ လျှော့ပါးသွားသော ခွန်အား များကို ပြန်လည် ပြည့်ဝ စေမည် ဖြစ်ပါသည်။ တစ်ခါ တစ်ရံ မိမိတို့ မျှော်လင့်ခဲ့သော အရာများသည် ဘာမျှ ဖြစ်မလာ သောကြောင့် ထိုမျှော်လင့်ခဲ့သော အရာများကို မေ့လျှော့ သွားသည့် အချိန်များ ရှိတတ်ကြပါသည်။ “ငါမျှော်လင့် ခဲ့သည့်အရာမှာ ဘာမှ မဟုတ်ပါလား” ဟု တွေးထင်ခဲ့သည့် အရာများ ရှိတတ်ကြပါသည်။ သမ္မာ ကျမ်းစာတွင် ထိုကဲ့သို့ ခံစားချက်မျိုးကို ယာကုတ်ထံတွင် တွေ့ရှိရပါသည်။ ကျွန်တော်တို့၏ မျှော်လင့်ခြင်း အခြား တစ်ဘက်တွင် အချိန်မည်မျှ ကြာနေပါစေ ဘုရားသခင်သည် အလုပ်လုပ်လျက် ရှိနေသည်ဆိုခြင်းကို သင်နားလည် စေချင်ပါသည်။
ကျမ်းစာထဲတွင် “ယာကုတ်” ဟူသောအမည်မှာ “လှည့်စားသူ” ဟု အဓိပ္ပါယ်ရှိသော်လည်း ထိုအခြေအနေမျိုးတွင် ဘုရားသခင်က တစ်သက်လုံး မထားခဲ့ပါ။ “ဘုရားသခင်၏ မင်းသားလေး” ဟု အဓိပ္ပါယ်ရသော “ဣသရေလ” ဟူသော နာမည်ဖြင့် သူ၏ အသက်တာကို အဆုံးသတ်စေခဲ့ပါသည်။ ယာကုတ်သည် မိမိအလွန်ချစ်သော သား ယောသပ်နှင့် ကွဲကွာသွားခဲ့သည်မှာ နည်းသောနှစ် မဟုတ်ချေ။ ယောသပ် အိမ်မက်စတင်မက်ခဲ့ချိန်မှ စတင်ကာ ရောင်းစားခံ၊ ကျွန်ခံ၊ ထောင်ကျ၊ ပြန်လွတ်၊ အိမ်ထောင်ကျ၊ နန်းတော်သို့ရောက် . . . စသည့် အချိန်ကာလသည် အနှစ် (၂၀)ခန့် ရှိသည်ဟု သိရပါသည်။ ယာကုတ် အတွက် သားနှင့် ကွဲကွာသွားခဲ့သည်မှာ ငါးနှစ်၊ ဆယ်နှစ်သာမက အနှစ် နှစ်ဆယ်ခန့် ကြာခဲ့ပြီ ဖြစ်သဖြင့် မျှော်လင့်ချက် သေဆုံး နေပြီဟု ဆိုနိုင်ပါသည်။ သို့သော် ယာကုတ်၏ မျှော်လင့်ခြင်း အခြားတစ်ဘက်တွင် ဘုရားသခင်သည် ကြီးမားသော လက်တော်ဖြင့် အလုပ်ကြီး လုပ်နေခဲ့သည် မဟုတ်ပါလား။
ယောသပ်နှင့် ပြန်လည်တွေ့ဆုံသည့်အချိန်တွင် ယာကုတ်ခံစားခဲ့ရသော ဆင်းရဲခြင်းနှင့် ဝမ်းနည်းခြင်း ကြေကွဲခြင်း တို့သည် ဝမ်းမြောက်ခြင်းသို့ ကူးပြောင်းကာ ကောင်းကြီး မင်္ဂလာများအဖြစ် အသွင်ပြောင်းပြီး ယာကုတ် ခံစားခဲ့ရ ပါသည်။ ထိုကဲ့သို့ပင် သင့်အသက်တာတွင် ခံစား ဝမ်းနည်းနေခဲ့ရသော အချိန် ကာလများ အတွက် ကြေကွဲ ဝမ်းနည်းမှု မဖြစ်စေချင်ပါ။ ဘုရားသခင်သည် အချိန်ကာလ မည်မျှပင် ကြာ နေစေကာမူ သင့်၏ မျှော်လင့်ခြင်း အကျိုး ရလဒ်ကို ဖြည့်ဆည်း ပေးရန် ပြင်ဆင် လုပ်ဆောင်နေပါသည်။ သင်ထားရှိသောမျှော်လင့်ခြင်းသည် အချိန် ကာလ များစွာကြာခဲ့သဖြင့် သေဆုံးသွားပြီဟု မခံစားသင့်ပါ။
(၃) ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်း တန်ခိုးနှင့် ပြည့်သော မျှော်လင့်ခြင်း
သမ္မာ ကျမ်းစာထဲတွင် သခင်ယေရှု ခရစ်တော် ပြန်လည် ရှင်ပြန် ထမြောက်စေခဲ့သော လူပုဂ္ဂိုလ် (၃) ဦးရှိပါသည်။ ပထမ တစ်ဦးမှာ အသက်ငယ်ရွယ်သေး သော ယာဣရု၏ သမီးဖြစ်ပါသည်။ လူတို့သည် ထိုသမီး သေဆုံးသွား သောကြောင့် ဝမ်းနည်း ကြေကွဲနေပါသည်။ အဘယ်ကြောင့် ဆိုသော် မျှော်လင့်ချက် ကုန်ဆုံးသွားသောကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။ မိန်ခလေး၏ မိဘများ ကိုယ်တိုင် ဝမ်းနည်း ကြသည်။ လူသားတိုင်းအတွက် ထိုအခြေအနေသည် မည်သည့် ပညာ၊ အစွမ်း၊ တန်ခိုး၊ ရာထူးများ ကိုင်ဆောင် ထားနေ စေကာမူ ထိုအခြေအနေသည် နောက်ဆုံး ဖြစ်သည်။ မည်သို့မျှ ပြန်လည် အသက်ရှင် လာဘို့၊ မျှော်လင့်ချက် များ ဆောင်ယူလာဘို့ မည်သို့မျှ မဖြစ်နိုင်ချေ။ ဘုရားသခင် သည်သာလျှင် မျှော်လင့်ခြင်း ဖြစ်ချေတော့သည်။ လူတို့ကို ဘယ်သောအခါမျှ ဘုရားသခင် သည် ဝမ်းနည်းခြင်းထဲတွင် ဖုံးအုပ်မထားချေ။ သခင်ယေရှုသည် အရာရာတိုင်း အတွက် မျှော်လင့်ခြင်း ဖြစ်သည် ဆိုသည် ကို သူတို့ နားမလည် ခဲ့ကြချေ။ သို့သော် သခင် ယေရှုသည် ထိုနေရာသို့ ရောက်ရှိ သွားသောအခါ ထိုမိန်ခလေးမှာ ပြန်လည် အသက်ရှင် လာပါသည်။ ထိုအခါမှ သူမ၏ မိဘများ နားလည်ခဲ့ကြသည်မှာ “သခင်ယေရှုသည်သာလျှင် မျှော်လင့်ရာ” ဖြစ်ကြောင်း သိရှိနားလည်လာကြပါသည်။ မည်မျှပင် အခြေအနေဆိုးကာ နောက်ဆုံး အခြေအနေ ဖြစ်နေပါစေ ဘုရားသခင်က သင့်ကို ပြန်လည် တည့်မတ်စေကာ အောင်မြင်မှုများဖြင့် ဖြည့်ဆည်း ပေးမည် ဆိုသည်ကို ဘယ်သော အခါမျှ မမေ့စေချင်ပါ။
ဒုတိယတစ်ယောက်မှာ သေပြီးနောက် ထမ်းစင်ဖြင့် ထမ်းကာ သုဿာန်သို့ ပို့ဆောင်နေသည့် အချိန်ဖြစ်သည်။ မည်သည့် မျှော်လင့်ချက်မှ မရှိနိုင်သော အခြေအနေဖြစ်သည်။ မျှော်လင့်ချက် ကုန်ဆုံးနေသောကြောင့် ထိုအလောင်း ကြီးကို မြေသို့ မြုတ်နှံရန် ပြင်ဆင်လုပ်ဆောင်နေခြင်းဖြစ်သည်။ သို့သော် သခင်ယေရှုနှင့် တွေ့သော အချိန်တွင် ပြန်လည် ထမြောက်လာလေတော့သည်။
နောက်ဆုံးတစ်ယောက်မှာ လာဇရုဖြစ်သည်။ သေပြီးသည်သာမက အုပ်ဂူတွင် မြုတ်နှံပြီးသည့်အခြေအနေ ဖြစ်သည်။ မည်သို့မျှ မျှော်လင့်ခြင်းမရှိပါ။ သေပြီး ပုပ်နေသော အခြေအနေဖြစ်သည်။ သို့သော် ယေရှုက အော်ဟစ်ကာ ခေါ်ယူ လိုက်သောအခါ အပုပ်နံ့ ကင်းစင်မှုများဖြင့် ပြန်လည် ထမြောက်လာ ပါတော့သည်။ အုပ်ဂူထဲမှ ထွက်လာပါတော့သည်။
လူ့အခြေအနေအရ ထိုအခြေအနေသည် မည်သို့မျှ အောင်မြင် အဆင်ပြေရန် မဖြစ်နိုင်။ သို့သော် ဘုရားသခင်သည် ရှင်ပြန် ထမြောက်ခြင်း တန်ခိုးတော်ဖြင့် လူတို့၏ လက်ရှိ အခြေအနေ အသီးသီးကို မှောက်လှန်ဖျက်ဆီးကာ လူတို့ မမျှော်လင့်နိုင်သည့် အခြေအနေကို ဖန်းတီးပေးတော်မူခဲ့သည်။ ဘုရားသခင်သည် သင်ဘာမျှ မလုပ်ဆောင် နိုင်သော အခြေအနေ မှာပင် ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်း တန်ခိုးတော်နှင့် ပြည့်ဝသောကြောင့် သေနေသော သင့်၏ မျှော်လင့်ခြင်းအခြေအနေကို ပြန်လည် ရှင်သန်ကြီးထွားစေနိုင်သည် ဆိုသည်ကို မမေ့ပါနှင့်။
သင့် အသက်တာထဲမှ ခက်ခဲ အားနည်းနေသော အခြေအနေ အသီးသီး အတွက် မျှော်လင့်ချက်များဖြင့် အသက်ရှင် နိုင်ရန် ယခုကဲ့သို့ ဝေငှလိုက်ပါသည်။ (၁) အသက်ရှင်သော မျှော်လင့်ခြင်း ရှိပါစေ၊ (၂) သင်၏ မျှော်လင့်ခြင်းသည် ဘယ်သောအခါမျှ သေမသွားပါစေနှင့်၊ (၃) သေနေသော မျှော်လင့်ချက်များ ရှိနေသည့် တိုင်အောင် ဘုရားသခင်က ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်း တန်ခိုးတော်နှင့် ပြည့်ဝသော ဘုရားဖြစ်သည်ကို အသက်တာတွင် စွဲမြဲစွာ မှတ်သားထား စေချင်ပါသည်။ ဘုရားသခင် ကောင်းကြီးပေးပါစေ။ (အာမင်)
Posted by Rev. Min Lwin at 8:43 AM
နိမ့်ပါးသူတို့အတွက် အောင်မြင်မှု ဆိုတာ ရနိုင်ပါသလား။
တရားသူကြီး အခန်းကြီး (၆-၇) မှာ ဝိညာဉ်ရေးပိုင်းမှာ အောင်မြင်မှု ရရှိသူတစ်ဦးအကြောင်းကို ဖော်ပြထားပါသည်။ ထိုပုဂ္ဂိုလ်၏ အောင်မြင်မှုကို တကမ္ဘာလုံးရှိ မျက်လုံးများအမြင်တွင် မအောင်မြင်ထိုက်သော သူတစ်ယောက်က အောင်မြင်သွားသည်ဟု မြင်ကြ မည်မှာ သေချာပါသည်။ သို့သော် ထိုလုပ်ဆောင်ချက်သည် ဘုရားသခင်၏ လုပ်ဆောင်ချက်သာ ဖြစ်ပါသည်။ အရှင်မြတ်သည် မအောင်မြင်ထိုက်သောသူ ဟု ပတ်ဝန်းကျင်က သတ်မှတ်ထားသောသူများကို အသုံးပြုပြီး ကိုယ်တော်မြတ်အတွက် အောင်မြင် သူများ ဖြစ်လာစေသည် မဟုတ်ပါလား။
အခြေအနေကို သတိထားပြီး ကြည့်ကြပါစို့။ ဣသရေလ လူမျိုးတို့သည် မိဒျန်လူမျိုးများ၏ လက်တွင် ကျရောက်ခဲ့သည်မှာ ခုနစ်နှစ် ခန့် ရှိပါပြီ။ ကျမ်းစာ၏ ဖေါ်ပြချက်အရ ဣသရေလလူများ၏ ဖောက်ပြန် ဆိုးသွမ်းမှုကြောင့်ဖြစ်ကြောင်း ဖော်ပြထားပါသည်။ (သူကြီး ၆း၁) ကိုကြည့်ပါ။
ထိုခေတ်ကာလအခါက တရားသူကြီးများကို လူမျိုးတော်အား ဦးဆောင်စေသည့် အချိန်ဖြစ်ပါသည်။ ထိုတရားသူကြီးများကို ပြန် လည် လေ့လာကြည့်ပါက မိမိ၏ ဘုန်းအတွက် ဆောင်ရွက်သော သူများကို အောင်မြင်မှု မပေးခဲ့ပါ။ ဖြစ်သမျှသော အခြေအနေ တိုင်းတွင် ကိုယ်တော်၏ ဘုန်းအတွက် အသုံးပြုခဲ့ကြောင်း သိမြင်ခဲ့ရပါသည်။
ဂိဒေါင်သည် ဣသရေလလူမျိုးထဲတွင် အနိမ့်ပါးဆုံးသော အတန်းအစားမှ မွေးဖွားလာသူဖြစ်ပါသည် (၆း၁၅-၁၆) ။ သို့သော် ဘုရား သခင်က သူ့ကိုအသုံးပြုရန် ဆုံးဖြတ်တော်မူခဲ့ပါသည်။ ဘုရားသခင်သည် တစ်စုံတစ်ယောက်ကို အသုံးပြုလိုသည့်အခါတိုင်း ထိုသူ၏ စိတ်နှလုံးသားတွင် ဘုရားအကြောင်းကို တွေးတော စိတ်ဝင်စားမှုကို အရင်ဆုံး ထည့်ပေးလိုက်ပါသည်။ ထိုသူသည် မည်မျှ လုပ် ဆောင်နိုင်သည်၊ ပညာတတ်သည်၊ ကြိုးစားအားထုပ်နိုင်သည် ဆိုသည့်အချက်မှာ အရေးမကြီးပါ။
(၁ကော ၁း၂၆-၂၈) ကို ပြန်ကြည့်လိုက်ပါ။ ဘုရားသခင်သည် နိမ့်ပါးသောသူ၊ ယုတ်သောသူ၊ မရေရာသောသူ၊ ပညာမတတ် သောသူ၊ အားနည်းသောသူများကို ရွေးကောက်တော်မူကြောင်းကို ဖော်ပြထားပါသည်။ သင်သည် မိမိကိုယ်ကို အားနည်းသူဟု အသိအမှတ်ပြုပြီဆိုပါက အောင်မြင် ရေးလမ်းကြောင်းပေါ်သို့ ရောက်ရှိနေပြီ ဖြစ်ကြောင်း သိထားစေချင်ပါသည်။ ကျွန်တော်တို့ သည် အောင်မြင် လိုပါက ဘုရားသခင်၏ အောင်မြင်ရေး လမ်းစဉ် အပေါ်တွင် လိုက်လျှောက် အသက်ရှင်ဘို့ လိုပါသည်။
သင်သည် အောင်မြင်လိုသောသူ ဖြစ်ပါက လောကလူသားတို့ သတ်မှတ်ထားသော လမ်းစဉ်ကို လိုက်လျှောက်ရန် မလိုပါ။ ဝိညာဉ် ရေးရာ အောင်မြင်မှုသည် ဝိညာဉ်ရေး အဓိကပိုင်းဖြင့်သာ ရောက်ရှိလာပါမည်။ စွမ်းရည်များ၊ ငွေကြေးကြွယ်ဝမှုများ၊ ကျော်ကြားမှု များဖြင့် မဟုတ်ပါ။ ဘုရားသခင်အသုံးပြုသောသူများသာ အောင်မြင်မှု ရရှိနိုင်ပါသည်။
ဂိဒေါင်သည် အောင်မြင်မှုအတွက် ဘုရားသခင်၏ နည်းလမ်းစဉ်နှင့် ဘုရားသခင်က မည်သို့ ဖြစ်စေလို သည်ဟူသော အရာကို တန် ဘိုးထား ဦးစားပေး လုပ်ဆောင်သောကြောင့် ဖြစ်သည်။ ကျမ်းစာ၏ နည်းလမ်းစဉ်အရ အလုပ်လုပ်ရပါမည်။ ထိုအလုပ်သည် ဘုရား သခင်အတွက် ဖြစ်ရပါမည်။ ကျွန်တော်တို့သည် အလုပ်လုပ်ရပါမည်။ ထိုအလုပ်သည် ဘုရားသခင်၏ နည်းလမ်း၊ ဘုရားသခင်၏ အကြံအစည်၊ ဘုရားသခင် သတ်မှတ်ထားသော လုပ်ငန်းစဉ်များ ဖြစ်ရပါမည်။
၁။ ဂိဒေါင်သည် ဘုရားသခင်ထံသို့ ပြောင်းလဲလာပါသည်။ (၆း၁၁-၂၃)
ဤအဆင့်သည် အောင်မြင်မှု၏ ပထမ ခြေလှမ်းဖြစ် အစဉ်ရှိနေတတ်ပါသည်။ သင်၏ နှလုံးသားကို ဘုရားသခင်က ပထမဦးဆုံး တို့ထိဘို့ လိုအပ်ပါလိမ့်မည်။ ယနေ့ လူအတော်များများသည် ကျွန်တော်တို့ ဘာလုပ်ရင် ကောင်းကြီးရလဲဟု တွေးတောက ဆုံးဖြတ် လုပ်ဆောင်လေ့ရှိပါသည်။ ထိုသို့ မဆုံးဖြတ်ခင် ကျွန်တော်တို့ မေးမြန်သင့်သည့် မေးခွန်းမှာ ဘုရားသခင် ကျွန်တော်တို့ကို ဘာလုပ် စေချင်သလဲဟု အရင်မေးမြန် သင့်ပါသည်။
က။ ဘုရားသခင်က အရင်ဆုံး သင့်ကို ဆွဲခေါ်ပါလိမ့်မည်။
ဘုရားသခင်သည် သူရွေးချယ်သောအချိန်ရောက်လာပြီဆိုပါက သူရွေးချယ်သောနေရာသို့ အရင်ဆုံး ခေါ်ယူတတ်ပါ သည်။ ဘုရားသခင်သည် သင့်ကို ဘယ်အချိန်မှာ စကားပြောတတ် ပါသလဲ။ သင်ကိုယ်တိုင် ဘုရားသခင်ကို မည်သည့် အချိန် များတွင် စကားပြောတတ်ပါသလဲ။ သင်ဘာလုပ်နေသည်၊ မည်သည့်နေရာမှာ ရှိနေသည်၊ ဆိုသည့်အချက်မှာ အရေးမကြီးပါ။ အရေးကြီးသော အချက်မူကား ဘုရားသခင်က သင်၏ နှလုံးသားကို တို့ထိဘို့သာ အရေးကြီးပါသည်။
လက်ရှိအခြေအနေက မိဒျန်လူမျိုးများကို ကြောက်ရွံ့လျက် ဘာမျှ မလုပ်နိုင်၊ မတတ်နိုင် ဖြစ်နေသော အခြေအနေ။ သို့ သော် ဘုရားသခင်က ထိုအခြေ အနေကို အမိအရ အသုံးချပြီး အမှုတော်အတွက်၊ လူမျိုးတော်အတွက်၊ ဘုန်းတော် အတွက် အလုပ်လုပ်ချင်သော အခြေအနေ ဖြစ်နေသည်။ လက်ရှိအခြေအနေ မည်သို့ပင် ဖြစ်နေစေကာမူ ဘုရားသခင်က ဂိဒေါင်ထံသို့ ရောက်ရှိလာခဲ့သည်။ ဘုန်းတော်အတွက် အလုပ်လုပ်ဆောင်တော့မည်။ သင်ကိုယ်သင် ဆင်ခြင်ပါ။ လက်ရှိ အခြေအနေဟာ အခက်အခဲများ၊ အကြောက် တရားများ ဖုံးလွှမ်းနေသော အခြေအနေ၊ အချိန်အခါ ဖြစ်ပေလိမ့်မည်။ သို့ သော် ဘု၇ားသခင်က ဘုန်တော်အတွက် အသုံးပြုချင်ပါသည်။
ခ။ ရွေးကောက်ခံရသူ အများစုသည် ဘုရားသခင်၏ ထိန်ချုပ်မှုကို ဆင်ခြင်လေ့ရှိသည်။ (၁၂-၁၄)
ဂိဒေါင်သည် သူ့ကို အသုံးပြုနိုင်သည်ဆိုသည့်အချက်ကို ဂိဒေါင်သည် ပထမဦးဆုံး သံသယ ဖြစ်လာပါသည်။ အဘယ် ကြောင့်ဆိုသော် လူမျိုးတွင် အနိမ့်ဆုံး အမျိုးဖြစ်နေသောကြောင့် ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် သူတို့၏ မိသားစု အခြေအနေ မှာလည်း အဆင်းရဲဆုံး ဖြစ်နေသောကြောင့် ဖြစ်သည်။ ထိုအခြေအနေတွင် ဘုရားသခင်က ဂိဒေါင်းကို “အားကြီးသော အချင်းသူရဲ” ဟု ခေါ်လိုက်ပါသည်။
ထိုအခြေအနေကို သင်စိတ်ကူးယဉ်ကြည့်လိုက်ပါ။ ဂိဒေါင် မည်ကဲ့သို့ ခံစားမည်နည်း။ ကိုယ်တိုင်က အကြောက်တရား ဖုံးလွှမ်းနေသူ ဖြစ်သော်လည်း ဘုရားသခင်က ထိုသူဘက်တွင် ရပ်တည်ကာ ကြီးမားသော အမှုကို ပြုတော်မူတော့မည်။ စိတ်လှုပ်ရှားဘွယ်ကောင်းသော အခြေအနေ မဟုတ်ပါလား။
ဂ။ မိမိ၏ အားနည်းချက်ကို အသိအမှတ်ပြုသည် (၁၅)
“ကျွန်တော်သည် လူမျိုးတွင် အနိမ့်ဆုံးဖြစ်သည်မဟုတ်ပါလား” ဟု ဘုရားသခင်ကို ပြန်လည် မေးခွန်း မေးလိုက်သည်။ ဂိဒေါင်သည် ဘုရားသခင်၏ အမှုတော်မြတ်ကို ထမ်းဆောင်ရန် ထိုက်တန်သူ မဟုတ်ဟု တွေးတောနေသည်။ ဘုရားသခင် အသုံးပြုလိုသူတိုင်းသည် မိမိအားနည်းချက်ကို ကိုယ်တိုင်နားလည် ခံစားတတ်သောသူများဖြစ်သည်။ မိမိအားနည်းချက်ကို အလေးမထား ဂရုမမူဘဲ “ငါသိသည်၊ ငါတတ်သည်” ဟူသော လူတို့အတွက် ထိုကောင်းကြီးမင်္ဂလာ မဖြစ်နိုင်ပါ။
မိမိ၏ အားနည်းချက်က ကိုယ့်ကို ယုံကြည်မှု ကင်းမဲ့စေသည်။ ထိုအချက်က သူ့ကို စိုးရိမ်စိတ်ကို ကြီးထွားစေသည်။ သို့သော် ဘုရားသခင် ကိုယ်တော် တိုင်က ကျွန်တော် တို့ကို အောင်မြင်မှု ပေးတော်မူမည် ဆိုသည့် အချက်ကို သင်ကိုယ်တိုင် နားလည် ခံစားတတ်ပြီဆိုပါက ဂိဒေါင်ကဲ့သို့ စိုးရိမ်တော့မည် မဟုတ်ပါ။
ဃ။ ဘုရားသခင်၌ အသက်ရှင်ရန် ဆုံးဖြတ်လိုက်သည်။ (၁၆-၂၃)
ဘုရားသခင်ထံမှ စကားတော်ကို ကြားနာသောသူတိုင်းသည် အလိုလို ခွန်အားများ ပြည့်ဝလာတတ်သည်။ ဂိဒေါင် အနေဖြင့် အခြေအနေ မည်သို့ ဖြစ်နေစေကာမူ နှုတ်ခပတ် တော်ကို ကိုယ်တိုင် ကြားနာ ခံယူခဲ့သူ ဖြစ်သောကြောင့် ခွန်အား များ ပြည့်လာပြီး ဘုရား သခင်နှင့် လျှောက်လှမ်းရန် ကြိုးစား အားထုပ် ပြင်ဆင် လေတော့သည်။
သင်ကိုယ်တိုင်က အကြောက်တရားများ လွှမ်းမိုး နေသေးလျှင် ဘုရားသခင်ထံမှ စကားတော်ကို ကိုယ်တိုင် ကြားနိုင်ရန် ဆု တောင်းပါ။ ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ခပတ် ကျမ်းစာကို ပိုမို ဖတ်ရှုပါဟု တိုက်တွန်းလိုပါသည်။
ဘုရားသခင်ထံ စကားပြောပြီး မိမိကိုယ်တိုင် ယဇ်ပူဇော်ကာ ဘုရားသခင်၌ ဆက်ကပ်လိုက် သည်။
၂။ ဘုရားသခင်အတွက် ယဇ်ပလင်ကို တည်ဆောက်သည်။ (၁၇-၂၄)
ဂိဒေါင်သည် ဘုရား သခင်နှင့် မျက်နှာ ချင်းဆိုင် စကား ပြောပြီး သောအခါ ဆိတ်သူငယ် တစ်ကောင်ကို ယူကာ ယဇ် ပူဇော်လျက် ယဇ်ပလ္လင်ကို တည်လိုက်လေသည်။ ထိုယဇ် ပလ္လင်ကို ယေဟောဝါ ရှလုံ ဟူသော အမည်ဖြင့် သမုတ်ခဲ့ကြောင်း ကျမ်းစာက မှတ်တမ်း တင်ထားသည်။
သင်ကိုယ်တိုင်လည်း ရောမ ၁၂း၁-၂ တွင် ဖော်ပြထားသော ယဇ်ပူဇော်မှုကို ပြုနိုင်ပါသည်။ သို့သော် ထိုအခြေအနေသည် ဘုရားသခင်နှင့် နဖူးတွေ့ ဒူးတွေ့ တွေ့သောသူများသာ လုပ်ဆောင်လေ့ရှိပါသည်။ သင့်သည်လည်း ဘုရားသခင်ကို ရှာမည် ဆိုပါက အတွေ့ခံသော ဘုရားဖြစ်ပါသည်။ ထိုနောက် အလိုတော်ရှိသော ယဇ်ကို ပူဇော်ခြင်းဖြင့် ဘုရားသခင်ထံမှ ငြိမ်သက် ခြင်းကို ရှာဖွေနိုင်ပါသည်။
၃။ ဗာလဘုရား၏ ယဇ်ပလင်များကို ဖျက်ဆီးလိုက်သည်။ (၂၅- ၃၂)
ဖြောင့်မက်ခြင်းတရားတွင် အပေါင်းလက္ခဏာ ဆောင်သော ဆောင်ရွက်ချက်များနှင့် အနှုတ်လက္ခဏာ ဆောင်သော ဆောင်ရွက်ချက်များကို တပြိုင်နက် လုပ်ဆောင်ရပါသည်။ ဂိဒေါင်သည် ယဇ်ပူဇော်သည်ဆိုရာတွင် မိမိအသက်တာထဲတွင် ဘုရားကို ပေါင်းထည့်လိုက်ခြင်း ဖြစ်သည်။
အနှုတ်လက္ခဏာဆောင်သော ဆောင်ရွက်ချက် တစ်ခုအဖြစ် “ဗာလ” ဘုရား၏ ယဇ်ပလ္လင်များကို ဖြိုဖျက်ပစ်လိုက်သည်။ အသက်တာထဲက နတ်ဆိုးနှင့် ဆိုင်သောအရာများ၊ ရုပ်တုနှင့် ဆိုင်သောအရာများကို ဖယ်ရှားလိုက်ခြင်း ပင်ဖြစ်သည်။ ထိုအရာကို ပြုလုပ်လိုက်ခြင်းဖြင့် မိမိအသက်တာထဲက ဘုရားမကြိုက်သောအရာများကို ဖယ်ရှားလိုက်ခြင်းဖြင့် အနှုတ်လက္ခဏာဆောင်သော ဆောင်ရွက်ချက်များကို ပြုလုပ်လိုက်ပါသည်။ ထိုအရာအားဖြင့် ဂိဒေါင်သည် “ယေရုဗာလ” ဟူသော အမည်သစ်ကို ရရှိခဲ့လေသည်။
သင့်ကိုယ်သင် ပြန်လည် ဆင်ခြင်ပါ။ မည်သည့်အရာများကို ဆောင်ရွက်ရမည်။ မည်သည့်အရာများကို ဖယ်ရှားရမည် ဆိုသည်ကို ဆုံးဖြတ်ပါ။ ထိုအရာအားဖြင့် ဘုရားသခင်သည် သင့်အတွက် အောင်မြင်မှုများကို ဆက်လက် လုပ်ဆောင်ပေးချင်ပါသည်။
၄။ ဘုရားသခင်၏ အလိုတော်ကို အတည်ပြုသည်။ ( ၃၆-၄၀)
ယနေ့ ခရစ်ယာန် ယုံကြည်သူများသည် ဘုရားသခင်၏ အလိုတော်ကို သေချာစေရန် မေးမြန် လုပ်ဆောင်သင့်ပါသည်။ ထိုအတွက် ဘုရားသခင်နှင့် အချိန်များများ ယူရပါမည်။ မိမိအသက်တာတွင် အရေးကြီးသော လုပ်ငန်းဆောင်တာများ၊ စီမံကိန်များ၊ ကြိုစားအားထုပ်မှုတိုင်း အတွက် ဘုရားသခင်နှင့် အချိန်ယူရပါမည်။ ထိုကဲ့သို့ဖြင့် မိမိအသက်တာအတွက် အောင်မြင်မှု ပန်းတိုင်ကို လှမ်းကိုင်နိုင်ပါလိမ့်မည်။
ဤနေရာတွင် ဂိဒေါင်သည် ပထမဦးဆုံး ဆောင်ရွက်ရမည့် အလုပ်ဖြစ်နေသည်။ ယုံကြည်ခြင်း အားနည်းနေတာ လည်း ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ ဘုရားသခင်နှင့် နဖူးတွေ့ ဒူးတွေ့ တွေ့ကြုံ ဗျာဒိတ်ခံထားရသူ ဖြစ်သော်လည်း အမှန်တကယ် ဘုရားသခင်၏ အလိုတော်ကို သေချာချင်ပုံရသည်။ သင်မည်မျှ ဘုရားသခင်၏ အလိုတော်ကို ရှာဖွေခဲ့ပါသလဲ။ မိမိအသက်တာထဲက မအောင်မြင်မှုတွေကို ပြန်လည် ဆင်ခြင်စဉ်းစားကြည့်ပါ။ ဘုရားသခင်ထံမှ အလိုတော်ကို ရှာဖွေမှု အားနည်းခဲ့သည်ဆိုပါက မည်သို့မျှ အောင်မြင်မှု မရနိုင်ကြောင်း ထပ်မံ သတိပေးပါရစေ။
၅။ နောက်ဆုံးတွင် ဘုရားသခင်၏ အလိုတော်ကို ပြည့်စုံအောင် လုပ်ခဲ့သည်။(၇း၁-၂၃)
မူလပထမတွင် မိမိ၏ အားနည်းချက်များကို ကြည့်ပြီး ယုံကြည်နိုင်မှု အားနည်းခဲ့သော်လည်း ယခုအခါ သတ္တိရှိရှိဖြင့် ဘုရားသခင်၏ အလိုတော်နှင့် ညီသော အမှုကို ဆောင်ရွက်ရန် ယခုအခါ ခွန်အားနှင့် ပြည့်ဝနေလေပြီ။
က။ ပြင်ဆင်မှု ပြုလုပ်ခြင်း
ဂိဒေါင်သည် ဘု၇ားနှင့်လည်း တွေ့ပြီးပြီ၊ အလိုတော်ကိုလည်း သိရှိပြီးပြီ၊ အတည်ပြုချက်များလည်း ရယူပြီးသောအခါ လုပ်ဆောင်ရမည့် လုပ်ငန်းစဉ်များအတွက် စတင်ပြင်ဆင်လေတော့သည်။
၁။ စောစောထသည်။ တောင်ပေါ်တတ်သည်။(၁)
ဂိဒေါင်သည် စောစော ထပြီး ဘုရားသခင်နှင့် အချိန်ယူခဲ့ပါသည်။ တောင်ပေါ်တတ်သည် ဆိုရာတွင် ဘုရားသခင်နှင့် တွေ့ဆုံရန် ဖြစ်သည်။
ဝိညာဉ်ရေး အောင်မြင်မှု ရရှိလိုသူတိုင်းသည် သူတို့နေ့ရက်များကို ဘုရားသခင်နှင့်သာ အစပြုလေ့ရှိသည်။ သင်၏ တနေ့တာ ဆောင်ရွက် အစပြုရန် အိပ်ရာပေါ်တွင် မနေပါနှင့်။ ကျောင်းမသွားခင်၊ အလုပ်မသွားခင်၊ ရုံးမသွားခင်၊ လုပ်ဆောင်စရာ လုပ်ငန်းများ မလုပ်ခင် ဘုရားသခင်နှင့် အစပြုပါ။
၂။ ဘုရားသခင်ထံက လမ်းညွှန်မှု ခံယူသည်။ (၁-၈)
ဂိဒေါင်သည် မိမိကိုယ်ကို အစွမ်းမရှိဟု သိသောကြောင့် ဘုရားသခင်၏ အစွမ်းကိုသာ အားကိုးသည်။ ဘုရားခိုင်သလို လုပ်ဆောင်သည်။ အတိအကျ လုပ်ဆောင်သည်။ လူသုံးသောင်းကျော်များသည်။ အနည်းဆုံး လူများဖြင့် အောင်မြင် မှုကို ရယူနိုင်ရန် ဘုရားသခင် စေခိုင်သည့်အတိုင်း အဆင့်ဆင့် စစ်ယူလိုက်သော အခါ လူ (၄၀၀) သာ ကျန်တော့သည်။ ထိုအရာမှာ ဘုရားသခင်၏ စေခိုင်မှုအရဖြစ်ပြီး၊ သူ၏ အကြံအစည်နှင့် ကြိုးစား အားထုပ်မှု များ မပါရှိပါ။
၃။ အောင်မြင်မှု ရရှိခဲ့သည်။
နောက်ဆုံးတွင် ဂိဒေါင်မမျှော်လင့်ရဲ၊ စိတ်ကူးပင် မရနိုင်သော အောင်မြင်မှုကြီးကို ခံစားခဲ့ရပါသည်။ ဘုရားသခင် အတူပါရှိသော လုပ်ဆောင်မှု၏ ရလဒ်မဟုတ်ပါလား။
သင်၏ ဘဝအသက်တာတွင် အားနည်း စိတ်ပျက်ဘွယ်ရာများနှင့် ဆင်ရဲမှု၊ ပညာမတတ်မှု၊ ဂုဏ်အသရေ မဲ့မှု၊ စွမ်းဆောင်ရည် အားနည်းမှုတို့ကြောင့် စိတ်အားငယ်နေပါသလား။ ဂိဒေါင်၏ အသက်တာမှ ခွန်အားယူကြည့်ပါ။ ဂိဒေါင်သည် အနိမ့်ဆုံး အမျိုးအနွယ်၊ အဆင်းရဲဆုံး မိသားစု၊ အကြောက်တတ်ဆုံး လူသား၊ စွမ်းဆောင်ရည် မဲ့သော သူတစ်ဦး ဖြစ်သော်လည်း ဘုရားသခင်၏ မစမှုနှင့် အတူပါရှိမှုတို့ကြောင့် အောင်မြင်မှု ရရှိခဲ့ပါသည်။
သင်၏အသက်တာကိုလည်း အလားတူ ဘုရားသခင်က မစကူညီလိုပါသည်။ ဘုရားသခင်ကို အားကိုးခိုလှုံခြင်းဖြင့် အောင်မြင်မှုများ ရယူခံစားနိုင်ပါစေ။
Posted by Rev. Min Lwin at 5:56 AM
Posted by Rev. Min Lwin at 7:05 PM
အဦးသီး ပေးလှူခြင်း (1)
ကျွန်တော်ရဲ့ ၀ိညာဉ်ရေးရာ ဘလောဂ်လေးကို လာလည်သောကြောင့် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
ကျေးဇူးတော် အကြောင်း (၃)
ယနေ့တိုင်ပျက်စီး ပျောက်ဆုံးခြင်းမရှိသော ကောင်းကြီးမင်္ဂလာများ
ကျွန်တော်နာမည် မင်းလွင်ပါ။ သင်းအုပ်ဆရာ တစ်ဦး ဖြစ်ပါတယ်။ အမှုတော် လုပ်ငန်း မှန်သမျှကို လုပ်ဆောင်ဘို့ စိတ်အားထက် သန်ပါတယ်။ မည်သည့် လူမှုရေး လုပ်ငန်းမဆို စိတ်ဝင်စားပါတယ်။